20W « MMWeather Information BLOG
Leaveacomment မုန်တိုင်းလွန်ကာလ, မှတ်တမ်း 20W, WUTIP, မုန်တိုင်းအကြွင်းအကျန် အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း WUTIP-20W ၏ မုန်တိုင်း အဖျားပိုင်း ဗီယက်နန်ကမ်းခြေအား စတင်ဖြတ်ကျော်လျှက်ရှိ
By mmweather.ygn, on September 30th, 2013%
တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း WUTIP သည် အဆင့်-၁ (CAT-1)တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဆင့်သို့ အားလျော့သွားပြီး အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားကာ မုန်တိုင်း အဖျားပိုင်းသည် ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ကမ်းခြေအား Quang Binh ပြည်နယ် Dong Hoi မြို့ အနီးမှ စတင်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိပါသည်။ မုန်တိုင်းဗဟိုသည် ဒါနန်းမြို့ မြောက်ဘက် မိုင် ၈ဝ ကျော်ခန့်သာ ဝေးကွာတော့ကြောင်း၊ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည့် လမ်းကြောင်းမှာ ဒါနန်းမြို့ အနောက်မြောက်ဘက် ၁၃ဝ မိုင်ခန့်ဖြစ်ပြီး၊ မုန်တိုင်း ဖြတ်ကျော်စဉ် မုန်တိုင်းဒီလှိုင်းအမြင့် ၂၅ ပေ ရှိပြီး၊ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၈၅ မိုင်မှ ၁ဝ၅ မိုင်ခန့်အထိ ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း JTWC မှ ယနေ့နံနက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၉း၃ဝ နာရီတွင် ထုတ်ပြန်သည့် . . . → Read More: အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း WUTIP-20W ၏ မုန်တိုင်း အဖျားပိုင်း ဗီယက်နန်ကမ်းခြေအား စတင်ဖြတ်ကျော်လျှက်ရှိ
One comment မိုးရွာသွန်းမှုခန့်မှန်းခြေ, မုန်တိုင်းလွန်ကာလ, မုန်တိုင်းသတင်း, သတိပေးထုတ်ပြန်ချက်, ရေကြီးခြင်း ဖြစ်နိုင်ခြေ, ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ခြင်း 20W, TYPHOON, WUTIP, တောင်တရုတ်ပင်လယ် မုန်တိုင်း WUTIP အဆင့်-၂ တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းအဆင့်ဖြင့် ဗီယက်နန်ကမ်းခြေကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည်
By mmweather.ygn, on September 29th, 2013%
JTWC မှ ထုတ်ပြန်သည့် Warning-11 တွင် မုန်တိုင်း ဗီယက်နန်ကမ်းခြေအား ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်စဉ် မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် လေတိုက်နှုန်း 90 knots(တစ်နာရီ ၁ဝ၄ မိုင် ခန့်)၊ မုန်တိုင်းဒီလှိုင်းအမြင့် ၂၈ ပေ ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မုန်တိုင်းသည် လက်ရှိ အချိန်တွင် အချင်းမိုင် . . . → Read More: မုန်တိုင်း WUTIP အဆင့်-၂ တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းအဆင့်ဖြင့် ဗီယက်နန်ကမ်းခြေကို ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည်
One comment MODEL-FORECAST, မိုးရွာသွန်းမှုခန့်မှန်းခြေ, မုန်တိုင်းသတင်း 20W, TYPHOON, WUTIP, တောင်တရုတ်ပင်လယ် WUTIP-20W အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ ပိုမိုအားကောင်းရောက်ရှိလာဦးမည်
တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာသည့် အားကောင်းသော တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း WUTIP(20W)သည် အနောက်ဘက်(Heading 261.8 degrees)သို့ တစ်နာရီ ၈ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ဆက်လက် ရွေ့လျားပြီး၊ ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ဒါနန်းမြို့ အရှေ့ဘက် ၃၆၅ မိုင်၊ ဟနွိုင်းမြို့ အရှေ့တောင်ဘက် ၅၉၅ မိုင်ခန့်၊ တရုတ်(ပြည်မ) မကာအိုမြို့ တောင်ဘက် ၃၈၅ မိုင်ခန့်အကွာ ပင်လယ်ပြင်၌ ဗဟိုပြုလျှက်ရှိပါသည်။
စက်တင်ဘာလ ၂၉ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ဝ၉း၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ မုန်တိုင်းဗဟိုချက်သည် မူလခန့်မှန်းလမ်းကြောင်းအတိုင်း ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီး ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ဒါနန်းမြို့ မြောက်ဘက် မိုင် ၁ဝဝ ခန့်၊ Hue မြို့ မြောက်ဘက် ၆၅ . . . → Read More: WUTIP-20W အဆင့်-၃ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ ပိုမိုအားကောင်းရောက်ရှိလာဦးမည်
Leaveacomment မိုးရွာသွန်းမှုခန့်မှန်းခြေ, မုန်တိုင်းသတင်း, သတိပေးထုတ်ပြန်ချက်, ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ခြင်း 20W, CAT-1, CAT-2, CAT-3, TYPHOON, WUTIP, တောင်တရုတ်ပင်လယ် မုန်တိုင်း WUTIP ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာမည်
By mmweather.ygn, on September 28th, 2013%
စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်(စနေနေ့) မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၈း၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် JTWC အချက်အလက်များအရ မုန်တိုင်း WUTIP(20W)သည် အဆင့်-၁(CAT-1)တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် လေတိုက်နှုန်း 65 knots(တစ်နာရီ ၇၅ မိုင်)အထိရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၃ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း၊ ရွေ့လျားနှုန်း ကျဆင်းသွားသည့်အတွက် ပိုမိုအားကောင်းသော အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ စက်တင်ဘာလ ၃ဝ ရက်(တနင်္လာနေ့) မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၆း၃ဝ နာရီတွင် ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။
28/12Z (TYPHOON 20W (WUTIP) WARNING NR 008- 065 knots) TYPHOON 20W (WUTIP) WARNING #8 WTPN32 PGTW 281500 . . . → Read More: မုန်တိုင်း WUTIP ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး အဆင့်-၂ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာမည်
Leaveacomment မိုးရွာသွန်းမှုခန့်မှန်းခြေ, မုန်တိုင်းသတင်း, ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ခြင်း 20W, WUTIP, တောင်တရုတ်ပင်လယ် မုန်တိုင်း WUTIP ယနေ့ညနေပိုင်း၌ အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဖြစ်လာမည်
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိပြီးနောက် စက်တင်ဘာလ ၃ဝ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ဝ၆း၃ဝ နာရီ နောက်ပိုင်းတွင် ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ကမ်းခြေအား ဒါနန်းမြို့အနီးမှ . . . → Read More: မုန်တိုင်း WUTIP ယနေ့ညနေပိုင်း၌ အဆင့်-၁ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း ဖြစ်လာမည်
Leaveacomment မိုးရွာသွန်းမှုခန့်မှန်းခြေ, မုန်တိုင်းသတင်း, ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ခြင်း 20W, WUTIP, တောင်တရုတ်ပင်လယ် နာမည်ရ မုန်တိုင်း WUTIP – 20W စက်တင်ဘာလကုန်ရက် ဗီယက်နန်ကမ်းခြေသို့ဝင်မည်
By mmweather.ygn, on September 27th, 2013%
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 20W အား – စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၈း၃ဝ နာရီတွင် ထုတ်ပြန်သည့် JTWC warning #04 တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အမည် “WUTIP”(မကာအို အမည် “လိပ်ပြာ” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်)အဖြစ် အမည်ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
မုန်တိုင်း 20W WUTIP 27 Sep 2013 1200Z Location: 17.0 115.3 Winds: 35 knots Central Pressure: 996 hPa
နောက်ဆုံးရရှိသည့် အချက်အလက်များအရ မုန်တိုင်း WUTIP သည် ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ဒါနန်မြို့ အရှေ့ဘက် ၄၇၅ မိုင်ခန့်၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ အနောက်မြောက်ဘက် . . . → Read More: နာမည်ရ မုန်တိုင်း WUTIP – 20W စက်တင်ဘာလကုန်ရက် ဗီယက်နန်ကမ်းခြေသို့ဝင်မည်
Leaveacomment မိုးရွာသွန်းမှုခန့်မှန်းခြေ, မုန်တိုင်းသတင်း, ကြိုတင်ကာကွယ်ပြင်ဆင်ခြင်း 20W, WUTIP, တောင်တရုတ်ပင်လယ် INVEST-93W လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 20W ဖြစ်လာပြီ
တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် INVEST-93W သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး၊ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း(Tropical Depression-TD) 20W(TWENTY)အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါသည်။
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း TD-20W(TWENTY)သည် ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ဒါနန်းမြို့ အရှေ့ဘက် မိုင် ၅၉ဝ ခန့်၊ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မင်္နလာမြို့ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက် မိုင် ၂၇ဝ ခန့်၊ တရုတ်(ပြည်မ)ဟောင်ကောင်မြို့၏ တောင်-အရှေ့တောင်ဘက် ၅၁ဝ မိုင်ခန့်အကွာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ကို ဗဟိုပြုနေပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်းက မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၆ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့်ရွေ့လျားခဲ့ပါသည်။
လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း(TD) 20W TWENTY 27 Sep 2013 0000Z Location: 15.5 117.0 Winds: 30 knots Central Pressure: 1000 hPa
စက်တင်ဘာလ . . . → Read More: INVEST-93W လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 20W ဖြစ်လာပြီ
2 comments မုန်တိုင်းသတင်း, သတိပေးထုတ်ပြန်ချက်, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း 20W, တောင်တရုတ်ပင်လယ်, လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်း တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NESAT ဗီယက်နန်ကမ်းခြေကို ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်လျှက်ရှိ
By mmweather.ygn, on September 30th, 2011%
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NESAT သည် ယနေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ၆ နာရီ TYPHOON2000 မှ ရရှိသည့် data အရ ဗီယက်နန်ကမ်းခြေအား Quang Ninh ပြည်နယ် Ha Long မြို့ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၃ဝ ခန့်မှ ကမ်းခြေကိုဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိပြီး မုန်တိုင်းဗဟိုမှာ ကမ်းခြေကိုစတင်ကျော်ဖြတ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။
လတ်တလောရရှိသည့် အချက်အလက်များတွင် မုန်တိုင်းဗဟိုသည် ဗီယက်နန်နိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း မြို့တော် ဟနွိုင်း၏ အရှေ့တောင်ဘက် ၁ဝ၅ မိုင်ခန့်တွင်တည်ရှိနေပြီး အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၂၆ ကီလိုမီတာ(တစ်နာရီ ၁၆.၁၅ မိုင်နှုန်း) ဖြင့်ရွေ့လျားနေပြီး၊ မုန်တိုင်းဗဟိုလေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၁၁ဝ ကီလိုမီတာမှ ၁၄ဝ ကီလိုမီတာ(၆၈.၃၅ မိုင်မှ ၈၆.၉၉ မိုင်နှုန်း) ဖြင့် တိုက်ခတ်လျှက်ရှိကာ၊ . . . → Read More: တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NESAT ဗီယက်နန်ကမ်းခြေကို ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်လျှက်ရှိ
One comment မုန်တိုင်းသတင်း 20W, NESAT, တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း, ဗီယက်နန်, မုန်တိုင်းသတင်း, တောင်တရုတ်ပင်လယ် ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်တော့မည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NESAT
By mmweather.ygn, on September 29th, 2011%
တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NESAT သည်၊ စက်တင်ဘာ၂၉ ရက် နံနက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၃ နာရီ အချိန် ရရှိသည့် data များအရ၊ မကာအိုမြို့တောင်ဘက် မိုင်၂ဝဝ ခန့်၊ အနီးဆုံး ဟိုင်နန်ကျွန်းကမ်းခြေမှ ၁၃၅ မိုင်ခန့်၊ ဟိုင်နန်ကျွန်း အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေမြို့ Wenchang အရှေ့ဘက် ၁၄၅ မိုင်ခန့်ဝေးသည့် တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တွင် ရောက်ရှိဗဟိုပြုနေပါသည်။ ဟိုင်နန်ကျွန်း၊ ဂွမ်ဒုံးပြည်နယ် အနောက်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းတို့နှင့်နီးကပ်လာပြီဖြစ်ပြီး ဟိုင်နန်ကျွန်းမြောက်ပိုင်းနှင့် ဂွမ်ဒုံးပြည်နယ် အနောက်ပိုင်းဒေသတို့မှ စက်တင်ဘာ ၂၉ ရက် ကြာသပတေးနေ့ညတွင် ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ဘွယ်ရှိကြောင်းလည်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။
The large Typhoon NESAT (PEDRING) is now nearing the shores of Hainan . . . → Read More: ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်တော့မည့် တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း NESAT
4 comments မုန်တိုင်းသတင်း 20W, NESAT, ပစိဖိတ်အနောက်မြောက်, မုန်တိုင်းသတင်း, လတ်တလောမုန်တိုင်းများ, တောင်တရုတ်ပင်လယ် Older Entries »